अस्ट्रेलियाद्वारा चीनसँग गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सम्झौता रद्द ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियअस्ट्रेलियाद्वारा चीनसँग गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सम्झौता रद्द !
अस्ट्रेलियाद्वारा चीनसँग गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सम्झौता रद्द !
सिड्नी । अस्ट्रेलियाले चीनसँगको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनासँग सम्बन्धित दुई वटा सम्झौता रद्द गरेको छ । बुधबार अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मेराइस पेनले चीनसँग गरिएका ४ वटा सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
त्यसमध्ये दुई वटा सम्झौता बेल्ट एन्ड रोड परियोजनासँग सम्बन्धित रहेका छन् । यो सम्झौता अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले चीनसँग २०१८ र २०१९ मा सम्झौता गरेको थियो । अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारलाई गत डिसेम्बरमा कुनै पनि प्रान्त वा विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको निर्णय रद्द गर्न सक्ने भिटो पावर दिइएको थियो ।
अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मेराइस पेनले विदेश नीतिका कारण चीनसँगको सम्झौता खारेज गरिएको हो । ‘म यी चार सम्झौता अस्ट्रेलियाको विदेश नीति र हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको प्रतिकूल रहेको ठान्छु,’ विदेशमन्त्री पेनले भनेकी छिन् ।हिजाे बिहीबार पुन: एक पटक विदेशमन्त्री पेनले यो निर्णय कूटनीतिक सम्बन्धका स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि लिइएको हो ।
उनले आफूहरुले कुनै देशलाई निशाना बनाउन नचाहेको पनि बताएकी छिन् । एबीसी रेडियोको एउटा कार्यक्रम विभिन्न प्रान्तले विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ नीतिअनुसार संघ सरकारलाई उक्त सम्झौता रद्द गर्ने अधिकारी भएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो निर्णय विशेष रुपमा अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय हितमाथि केन्द्रित रहेको छ । अस्ट्रेलियाको कूटनीतिक सम्बन्धमा स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले यो निर्णय लिएका हौं ।’